Imbonakalo yePlaxo Alpha | Martech Zone
Imbonakalo yePlaxo Alpha
NgoMvulo, Meyi 28, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ndibe ngumlandeli omkhulu UPlaxo okoko ndayibona okokuqala. Ndigcina iincwadi zedilesi kwi-intanethi nakwi-intanethi kwiindawo ezili-XNUMX, kubandakanya iselfowuni. Ukongeza ndineakhawunti ye-LinkedIn. Ukugcina ngaphezulu kwazo zonke kuyothusa… ukuba ibingenguye uPlaxo.
Khawufane ucinge ukuba wonke umntu omaziyo ugcina iinkcukacha zedilesi yakhe kwincwadi yakho yeedilesi ukuze ungaze uyichukumise… nguPlaxo lowo! 'Ubhalisela' umsebenzi wakho wonxibelelwano okanye ulwazi lwasekhaya kwiPlaxo kwaye nangaliphi na ixesha uvumelanisa iincwadi zeedilesi, uPlaxo unakekela ezinye. Kukho okrelekrele okrelekrele kakhulu oza kudibanisa ulwazi oluvela kumakhadi ama-2 nangaphezulu kwaye ikuvumela ukuba ujonge ukudityaniswa kwaye uyamkele.
Ndingene ePlaxo ngale mvakwemini kwaye ndothuka ngokumangalisayo ngokungena yayisisimemo kuPlaxo Preview. Xa ndiyicofa, ndangeniswa kwiphepha elitsha lasekhaya lasePlaxo-kubandakanya incwadi yedilesi, ikhalenda, yonke imithombo yam yokuvumelanisa kunye nezinye izinto ezintsha, ezinje ngeMiyalezo ekhawulezileyo esekwe kwisikhangeli esivela eMeebo, ecards, imisebenzi, amanqaku, imozulu, iimephu nguYahoo! kwaye ucofe ukubiza ilizwi nge-IP nguJajah!
Nabani na othungelanayo njengoko ndenzayo, esi sixhobo kufuneka sibe naso! Ndiyakwazi ukufikelela kuyo nge-browser-mobile kunye ne-interface ekhangelekayo ekhawulezayo kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Iqonga leBlog Blog
Meyi 28, 2007 kwi-8: 41 PM
Ewe! Ndiyayithanda nje 🙂
Meyi 29, 2007 kwi-4: 39 AM
Ngaba uyayisebenzisa inkonzo yepremiyamu? Ezinye zeempawu zepremiyamu zibandakanyiwe 'njenge-contact de-duper' zizinto ekufanele ukuba zikwinkonzo esemgangathweni, kodwa ndiyayiqonda imeko yeshishini kutheni ingeyiyo. Kodwa ndiyayithanda umbono wokudibanisa kunye neprofayile yam ye-LinkedIn.
Kwaye ukufikelela kwiselfowuni kuya kuba sisibonelelo esikhulu, nangona besele ndisebenzisa iSync kwiMac yam ukuvumelanisa incwadi yedilesi neNN95 yam. Kodwa iyakwenza lula izinto ukuba zonke zivele kumthombo omnye.
Meyi 29, 2007 kwi-7: 52 AM
Ewe, ndiyayihlawulela inkonzo yepremiyamu. Ungqamaniso olutsha luya kuvumelanisa nencwadi yakho yedilesi ye-Mac kunye ne-iCal! I-de-duper kufuneka ukuba unayo, ndiyavuma.
UTony Chung dot CA
Meyi 29, 2007 kwi-11: 47 AM
Kulungile Doug, ndisele i-Kool-aid ndaza ndakhuphela i-toolbar ye-Outlook. Ndiqinisekile ukuba yile nto bendiyifuna. Mnandi!
Meyi 29, 2007 kwi-7: 43 PM
Awuyi kuphoxeka, Tony! Khange ndikukhokele ekulahlekeni ngokusingathwa, akunjalo? 🙂
Meyi 30, 2007 kwi-11: 06 AM
Juni 14, 2007 ngo-9: 39 PM
Kuya kufuneka ujonge spock.com. Ndihambise bonke abafowunelwa endibaziyo spock.com. Sisicelo esipholile ngokupheleleyo. Yile nto kwakufuneka ukuba ibe yiplaxo.
Juni 14, 2007 ngo-10: 38 PM
Ndenze isicelo sesimemo kuSpock, kodwa andiboni ukuba inokubetha njani uPlaxo! Ndiza kuyinika isiza, nangona!